मलेसियामै मलेसियालाई चुनौती दिने यस्तो छ नेपालको तयारी (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
मलेसियामै मलेसियालाई चुनौती दिने यस्तो छ नेपालको तयारी (फोटोफिचर)
डिसी नेपाल , १८ जेठ २०७६
तस्वीर : एसके शर्मा/डिसीनेपाल
काठमाडौ । नेपाली फुटबल टिम यति बेला मलेसियामा छ । मलेसियासँग आइतबार मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाली टिम मलेसियामा कडा अभ्यास गरिरहेको छ ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बलियो टिम मलेसियालाई चुनौती दिन आफु तयार रहेको बताए ।
उनले मलेसियन टिम निकै बलियो रहेको बताउँदै जित निकाल्नेमा आफु आशावादी रहेको उल्लेख गरे । ‘मलेसियन टिम नेपालभन्दा बलियो छ । हामी राम्रो फुटबल खेल्दै जित्नको लागि खेल्नेछौँ ’, कालिनले भने ।
कप्तान विराज महर्जनले पनि नेपाली टिम आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिने बताएका छन् ।
खेल मलेसियाको बुरीत जालिल राष्ट्रिय मैदानमा हुनेछ । खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने आठ बजे सुरु हुनेछ ।
फिफा बरियतामा नेपाल १ सय ६१ औ स्थानमा रहँदा मलेसिया १ सय ६८ औ स्थानमा रहेको छ । फिफा बरियतामा नेपाल माथि देखिए पनि प्राविधिक रुपमा मलेसिया बलियो टिम हो ।
विश्वकप छनोटको तयारीमा रहेको नेपालले मैत्रिपुर्ण खेललाई विशेष तयारीका रुपमा लिएको छ । मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले स्ट्राइकरद्वय विमल घर्ति मगर र भरत खवासलाई टिम बाहिर राख्दै नेपाली टिम तयार गरेका छन् ।
उनले फरवार्ड लाईनमा अभिषेक रिजाललाई मौका दिएका छन् । उनी पहिलो पटक टिममा परेका हुन् । कालिनले यसअघि कुवेत भ्रमणमा रहेका रवि पासवान, अजित भण्डारी, विमल राना, रवि सिलवाल र सन्तोष तामाङलाई दोस्रो मैत्रिपुर्ण भ्रमणमा समावेश गरेका छन् ।